Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay amiirka cusub ee dalka Kuweyt | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay amiirka cusub ee dalka Kuweyt
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay amiirka cusub ee dalka Kuweyt
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay Amiirka cusub ee dalka Kuweyt Sheekh Nawaaf Al-Axmed isaga oo gaarsiiyay dhambaalkii tacsida ahaa ee uu ka siday Shacabka iyo Dowladda federaalka Soomaaliy.
Ra;iisul Wasaare iyo Boqorka cusub ee Kuweyt ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay sii joogteeynta iskaashiga ku dhisan walaaltinimada iyo is-garab istaagga ee u dhexeeya labada dal.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa intaas kaddib booqday qabriga Boqor Sheekh Sabaax Al-Axmed oo uu u soo duceeyey, Eebbana uga baryay in uu naxariistii Janno ka waraabiyo.
Wafdiga Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa dalka Kuwait u tagay in uu hoggaanka iyo shacabka Kuwait gaarsiiyo tacsida dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed ee ku aaddan geeridii Sheikh Sabaax AlAxmed.
Boqor Sabaax Al-Axmed 29-kii bishii Sebteembar ku geeriyooday dalka Mareykanka waxaana Golaha Wasiirada dalka Kuweyt ay u magacaabeen Nawaaf Al-Axmed u magacaabeen inuu noqdo boqorka cusub ee dalka Kuweyt.
Nawaaf Al-Axmed ayaa walaal dhinaca Aabaha ah la ahaa boqorka geeriyooday ee Sheek Sabaax Al-Axmed.